ची*नबाट कोरोना भाइरसबारे सिक्नै पर्ने यी कुरा । प्रा.डा.राजिव झाको अनुभव – Butwal Sandesh
ची*नबाट कोरोना भाइरसबारे सिक्नै पर्ने यी कुरा । प्रा.डा.राजिव झाको अनुभव
शुक्रबार अपराह्न भैँसेपाटीस्थित निवास पुग्दा उहाँले चिं*नियाँ सरकारका प्रतिनिधि, प्राध्यापक र चिकित्सकहरुबाट बधाई ग्रहण गरिरनुभएको थियो । उहाँको वीच्याट अकाउन्टमा निरन्तर फोनको घन्टी बजिरहेपछि हामीले केहीबेर कुर्यौँ । उहाँले कोरोनाकै विषयमा अनुसन्धान गर्न चीनको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबाट ८ लाख आरएमबी
(चि*नियाँ पैसा) अनुदान पाउनुभएको रहेछ । एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ हुने सो रकम प्राप्त गरेको खबर भर्खरै चिनियाँ साथीहरुबाट पाएका प्राडा.झा पनि खुसी देखिनुहुन्थ्यो ।
“सरी है, ची*नबाट साथीहरुको निरन्तर फोन आएकाले तपाईंहरुलाई कुराएँ” प्रा.डा. झा कुराकानीलाई अब तयार हुनुभयो । हामीलाई पनि जिज्ञासा भयो कोरोना विषयमा नै जान्ने । किनभने यतिखेर संसारका मानिसले सबैभन्दा धेरै खोजी गरेको र सुन्न चाहेको विषय कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने नै होला सायद । हामीले पनि यहीँबाट वार्ता शुरु ग¥यौँ– तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको अनुदान कस्तो हो ? यसबाट के गर्ने हो ?
तीन महिना पहिलेको ‘कोभिड–१९’ को मुहान मानिने उहान यतिखेर भने सामान्य जीवनमा फर्किसकेको छ । मेट्रो रेल तथा बस चल्न शुरु गरेका छन् । मानिसहरु सामान्य अवस्थामा फर्केका छन् । कलकारखाना, होटल, रेष्टुरेन्ट नियमित जस्तै भइसकेका छन् । चि*नियाँले यति चाँडै उहानलाई यस्तो सामान्य अवस्थामा ल्याइसकेको छ । अझ आफ्ना केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारका अनुसन्धान कोषहरुलाई यति चाँडै ‘कोरोना अनुसन्धान कोष’ मा परिणत गरेर अनुसन्धानदाता र वैज्ञानिकलाई अनुदान दिन थालिसकेकोले आगामी दिनमा चि*नियाँहरु कोरोनाको विषयको अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउलान् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसबाट हामीले पनि केही सिक्न सकिएला भनेर उहाँले प्राप्त गरेको यो व्यक्तिगत अनुसन्धानवृत्तिको विषयमा बताइदिन अनुरोध ग¥यौँ र यहाँ प्रस्तुत गरेका हौँ ।
तीन हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्या न लिएको कोरोना भाइरस घरेलु रुपमा नियन्त्रणमा लिएपछि चीन यतिखेर संसारलाई सहयोग गर्दैछ । उ*हान सुस्ताएर दुई महिना पछि उठेपछि कोरोनाको इपिसेन्टर अहिले अमेरिका बनेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म यो प्राणघा’तक भाइरसले अमेरिकामा मात्र सात हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ र दुई लाखभन्दा बढी स ङ्क्रमित भएका छन् । स्पेन, इटाली चरम स’ङ्कटमा छन् । छिमेकी देश भारतमा समेत कोरोना भाइरसको स ङ्क्रमण बढ्दै गएको छ ।
प्राध्यापक डा राजिवकुमार झा चीनको सियानमा बस्नुहुन्छ । बाइस वर्षदेखि ची*नमा रहनुभएका उहाँ मेडिकल प्राध्यापक, चिकित्सक र युवा वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ । कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रुपमा भया’वह बन्दै गएको सन्दर्भमा चीनको सियान विश्वविद्यालयका अनुसन्धानदाता प्राध्यापक झालाई पछ्याउँदै हामी पनि उहाँको निवास भैँसेपाटी पुगेका थियौँ ।
कोरोनाको विश्वव्यापी म*हामारीको पछिल्लो अपडेट लिइरहनुभएका प्राध्यापक झालाई अर्काे फोन आयो उहाँका पिएचडी विद्यार्थीको र भन्दै थिए– पछिल्ला दिन चीनमा नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छैनन्, हिजो त एकजनाको पनि मृ त्यु भएन । उहाँको निर्देशनमा केही चिनियाँ र अन्य देशका शोधार्थीले मेडिकल विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् । त्यसैबेला उनले शनिबार चीनले कोरोनाबाट मृत्यु भएका चि नियाँ नागरिकको सम्झनामा श्र’द्धाञ्ज’लि सभा गर्न लागेको र त्यसलाई राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाएर राष्ट्रिय शो’कको दिनका रुपमा पनि घोषणा गरेको जानकारी गराए ।
सन् २०१९ बिदा हुँदै थियो । पश्चिमाहरु नयाँ वर्षको स्वागतको तयारीमा थिए । कोही क्रिस्मस मनाउँदै थिए त कोही लामो विदा लिएर विदेश घुम्ने तयारीमा थिए । डिसेम्बरको अन्तिम साता ची*नबाट खबर आयो निमोनियाको लक्षणसँग मिल्दो जुल्दो खालको नयाँ रोग देखिएको छ ।
डिसेम्बरको २६ र २७ तिर उहान शहरमा २७ जना यस्ता बिरामी आए । उ*हानको स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना नै दियो । त्यसमा भनिएको थियो– सार्सको लक्षणसँग मिल्दो जुल्दो खालका बिरामी आए, त्यसमध्ये दुई चार जना बाहेक अरु सबै निको भएर घर फर्के । एक हप्ता पछि त्यस्ता बिरामी ४४ पुग्यो । अर्थात् सन् २०२० जनवरीको पहिलो साता अघिल्लो साताको भन्दा झण्डै दोब्बर बिरामी सोही प्रकृतिका देखिए । जनवरीको २० सम्म कुनै नयाँ बिरामी देखिएनन् । त्यसलगत्तै चैतको खरमा आगो लागेजस्तै गरी उहान र त्यसबाहिर पनि यो भाइरस फैलिँदै गयो ।
प्रा.डा.झा त्यस समयको ची*नको अनुभव सुनाउनुहुन्छ– चिनियाँ नागरिक वसन्त पर्वलाई धुमधाम मनाउने तयारीमा थिए त्यसैले धेरै स्वदेश र विदेशबाट घर फर्कदै थिए । चीनको द्रूतगतिको मेट्रो रेल भरीभराऊ थियो । हवाई जहाजका सबै सिट भरिएका थिए । नियमित भन्दा धेरै बढी उडान भइरहेका थिए । विश्वविद्यालय, विद्यालयहरु बन्द थिए । मानिसको चाप बढ्ने र आवत जावत पनि उस्तै हुने समयमा उ*हानमा वि*स्फोट भयो । जनवरी २३ मा देखिएको महामारीको ध’क्काले चिनियाँको नयाँ वर्षलाई समेत अर्को साल सारिदियो । उता पश्चिमाहरु भने कोरोनालाई सुरुमा उहान र पछि चिनियाँ भाइरसको नाम दिन थालेका थिए । आजन त्यही भाइरस संसारका २०३ देशमा पुगेको छ र अहिलेसम्म ५९ हजार नागरिकको ज्या’न लिइसकेको छ ।
वास्तवमा चीनकै मोडल अपनाएको भए अरु देशमा अहिलेको रुप नलिने उहाँको अनुभव छ । बाहिरका देशहरुमा असावधानी र अराकजताका कारण स्पेन, इटाली र अहिले आएर अमेरिकामा यो अवस्था आयो । डा.झालाई हामीले बीचैमा सोध्यौँ– कसरी सफल भयो चीन कोरोना माथिको विजय प्राप्त गर्न ? “मानिस मानिसबीचको सम्पर्कको कडी तोड्न चीनले गरेको प्रयास नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय थियो । लकडाउन नै त्यसको वास्तविक कारण बन्यो” डा झाले भन्नुभयो “रातारात अस्पताल बने, हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी उहान ओरालियो । घरघरमा गएर स्वास्थ्यकर्मीले नमूना परिक्षण गर्दै अस्पताल पठाउन थाले, मानिसहरु श’ङ्कै नलाग्दा पनि परीक्षण गर्न आए, घरमा बस्नेहरु पनि आफै बडो अनुशासित क्वारेन्टाइनमा बसे, यस्ता धेरै कारणहरु छन् जसले चीनलाई यतिचाँडै सफल बनायो ।”
उहाँको अनुभवले यो बताउँछ कि– चीनको प्रविधि, जनशक्ति र सार्सको समयमा सिकेको अनुभवले पनि उनीहरु आफैमा ढुक्क थिए । महामारीसँग जु’ध्ने नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति, उपलब्ध भौतिक सामग्री र नागरिकको समर्थन नै सफलताको कारण हो ।
चीनको उहानमा लकडाउन गर्दा पश्चिमाहरुले मानवअधिकारको विषय उठाएको भन्दै डा.झा भन्नुहुन्छ “वास्तवमा त्यो त मानअवधिकार भन्दा पनि जनताको जीवन र’क्षा गर्नका लागि लिइएको कदम थियो नि होइन ? हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीमा पनि बडो वैज्ञानिक र पुरानो भनाइ छ नि महामारीमा ज्यान जोगाउनु भन्ने । आखिर महिनादिन भन्दा बढी नै लकडाउन भयो त्यसैले त थोरै क्षतिमै रोगमाथि विजय नै प्राप्त भयो नि होइन ? नत्र भन्नुस त के हालत हुन्थ्यो होला आज चीनको ? अमेरिकाले पनि यही गर्नुपथ्र्याे । खुल्ला समाजको परिचायक बन्न खोजेर मात्र हुँदैन, जुन देशको पनि पहिलो काम त आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउने नै हो भन्छु मत ।